SPECIAL TRIP ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးစဉ် ~ SPECIAL TRIP
SPECIAL TRIP ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးစဉ် 11:48 PM
SPECIAL TRIP အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာခရီးသွားမှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ
၁။ ရန်ကုန်မြို့ တွင်း အိမ်အရောက် ၀န်ဆောင် မှုပေးခြင်း။၂။ နယ်မှ ခရီးသည်များကို အဆင့်မြင့် တည်းခိုခန်း များတွင်
အခမဲ့ တည်းခိုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။၃။ သက်ကြီး ရွယ်အိုဖြစ်ပါက သီးသန့်ခုံပေး၍ လိုအပ်လျှင် ဘီးတပ် ကုလားထိုင် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ သီးသန့်အကူထားပေးခြင်း။၄။ ခရီးဆောင် သေတ္တာ ၊ဘေးလွယ်အိတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ဦးထုပ် ၊
ယောဂီပုဝါ၊ ရင်ထိုး၊ ခရီးစဉ်လမ်းညွန်၊ ဘုရား စာအုပ်နှင့် DVD မှတ်တမ်း ခွေများ မေတ္တာ လက်ဆောင် ပေးခြင်း။၅။ ခရီးသည်(၁၆)ဦး ပြည့်လျှင်(၁)ဦး အခမဲ့ လိုက်ပါခွင့်ပေး၍ ခရီး သည် စုစည်းပေးသောမြို့ တွင်းနှင့်နယ် ကိုယ်စား လည်များအား အထူးခံစားခွင့်ပေးခြင်း။၆။ SPECIAL TRIP ၏ အထူးအစီအစဉ် အရ သံဃာတော်နှင့် သီလရှင်များအားမည်သည့်ခရီးစဉ်မဆို တစ်ဦး လျှင်ကျပ် (၅သောင်း)တိတိလျှော့ပေးခြင်း။၇။ SPECIAL TRIP မှ ခရီးသည်များ မဇ္ဈိမဒေသတွင် ကုသိုလ် ယူဖူးမျှော်နိုင်ရန် ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုး များမိမိ၏ မိသားစုများနှင့် တွေ့ ဆုံဖူးမျှော် ကုသိုလ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်
မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာရက်ကိုရွေးချယ်၍ SPECIAL TRIP နှင့်
ဆက်သွယ်လိုက်ပါ သင်၏ ခရီးစဉ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဝဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးဝန် ဆောင်မှု ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သူများ(၈.၅သိန်း)၊ မရှိသူများ(၉သိန်း) -(၁၁)ညအိပ်(၁၂)ရက်ခရီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပြီး
သူများ(၈သိန်း)၊ မရှိသူများ(၈.၅သိန်း) -(၇)ညအိပ်(၈)ရက်ခရီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပြီး သူများ(၆.၅သိန်း)၊ မရှိသူများ(၇သိန်း)လေယာဉ် လက်မှတ် ၊လေဆိပ်ဝင်ကြေး၊ D-Form၊ဗီဇာကြေး၊
အာမခံကြေး၊ စားစရိတ်၊ ဟိုတယ်ခ၊ ကားခ၊ ၀င်ကြေးများ အပြီး အစီးပါဝင်ပြီး၊ မည်သည့် အကြောင်းနှင့် မျှထပ်မံကောက် ယူခြင်းပြုလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အပြည့်အ၀ အာမခံပါသည်။
ခရီးသည်အနေဖြင့်လှူဒါန်း/ဈေးဝယ်ရန်သာကုန်ကျပါမည်။ထွက်ခွာမည့်ရက်များ မှာနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှမေလအထိပုံမှန်ပို.ဆောင်ပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးစဉ် မိုင် ခရီးစဉ် မိုင် ဗုဒ္ဓဂယာ-မိဂဒါဝုန် (၁၅၇မိုင်) မိဂဒါဝုန်-သင်္ကဿနဂိုရ် (၃၄၄မိုင်) သင်္ကဿနဂိုရ်-နယူးဒေလီ (၂၁၃မိုင်) သင်္ကဿနဂိုရ်-သာဝတ္ထိ (၂၈၁မိုင်) သာဝတ္ထိ-လုမ္ဓိနီ (၁၃၉မိုင်) လုမ္ဓိနီ-ကုသိနာရုံ (၈၇မိုင်) ပတ္တနား-ရာဇဂြိုလ် (၆၂မိုင်) ရာဇဂြိုလ်- ဗုဒ္ဓဂယာ (၆၂မိုင်) Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားမှဘန်ကောက်ခရီးစဉ်
ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ မဟာတန်ခိုးရှင် သမိုင်းဝင်မြဘုရား အပါဝင် လျောင်းတော်မူဘုရား ၊ကျောက်ဘုရား၊ တောင်ပေါ်ဘုရား ၊လေးမျက်နှာဘုရား၊ထူးဆန်းထွေလာရေအောက်ကမ္ဘာMBK Shopping mall. အယုဒ္ဒယမြို့ ရှိ ရှေးဟောင်းအမွေ အနှစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောသမိုင်းဝင် စေတီပုထိုးများ ဆီသို့ လေ့ လာဖူးမျှော်နိုင်ရန်နှင့်၊ ပတ္တရားအပန်းဖြေ ကမ်းခြေခရီးစဉ်။
နိုင်ငံကူး လက်မှတ်မရှိ သူများအတွက် လိုအပ်ချက်များ· သံဃာတော်နှင့် သီလရှင်များ သာသနာဝင် စိစစ်ရေးကဒ်ပြား၊ နယ်သံဃာ့ နာယကထောက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၃)စောင်စီ၊ပတ်စ်ပို့ ဆိုဒ်ဓါတ်ပုံ ကာလနှင့်(၄)ပုံ။ လူပုဂ္ဂ္ဂ္ဂိုလ်များ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူ(၅)စောင်စီမှတ်ချက်။ ။ မှတ်ပုံတင်နှင့်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ပြင်ရာ/
ဖျက်ရာပါရှိခြင်း၊ဓါတ်ပုံပျက်စီးနေ ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်နှင့်
ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။မိမိနေထိုင်သည့်မြို့ နယ်တွင်မြို့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှအမြတ်ခွန် ကင်းရှင်းကြောင်းပုံစံ(၁၇)ယူပေးရမည်။· မှတ်ချက်။ ။အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးသူများပုံစံ(၁၇) မလိုပါ။ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး သူများပုံစံ(၁၇)ပေးရပါမည်။
သံဃာနှင့် သီလရှင်များပုံစံ(၁၇)လုံးဝမရှိပါ။ပတ်စ်ပို့ဆိုဒါကာလာနှင့်(၄)ပုံ။
အငြိမ်းစားဝန်းထမ်း ပင်စင်စာအုပ်(သို.မဟုတ်)အမိန့် စာမိတ္တူ(၃)စောင်၊နိုင်ငံဝန်ထမ်းများမှာ
မိမိထမ်းဆောင်သည့်ဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ပခံစားခွင့်ပါရှိရပါမည်။ တက္ကသိုလ်ပြီးစီးသူများ ပညာရေကင်ရှင်းကြောင်း(EC)လုပ်ပြုလုပ်ပေးရမည်။
မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊သန်ခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ပတ်စ်ပို့ ဆိုဒ်ဓါတ်ပုံ ကာလာနှင့်(၄)ပုံနိူင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းပေးရမည်။မှတ်ချက်။ ။ နိူင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသေးသူ(၁)လကြို တင်စာရင်းပေးရမည်။
Special Trip အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း
ရန်ကုန်ရုံးချုပ်- အမှတ်(၁၁)ချမ်းသာလမ်း၊ကျွန်းတောတောင် ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း- ၀၁-၅၂၇၂၅၀ ၊ ၀၉၆၄၁၄၀၂၂ ၊ ၀၉၄၂၀၀၅၆၆၈၄ ၊ ၀၉၄၃၂၀၉၆၃၆
မန္တလေးရုံးခွဲ - အမှတ်(၁၅)အောင်ဇမ္ဗူကျော်တိုက်တန်း ၊ ၈၇လမ်း ၊၃၉-၄၁ ကြား ၊ မန္တလေးမြို့ ။ ဖုန်း - ၀၉၉၁၀၁၃၇၂၆ ၊ ၀၉၆၈၁၂၄၃၄ ၊ ၀၉၄၀၀၀၁၆၀၀၀မြစ်ကြီးနားရုံးခွဲ - TOP တေးသံသွင်း ၊ အမှတ်(၂၂၀)ယုဇနရပ်ကွက် ၊
ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ၊ ပန်းခြံရှေ. မြစ်ကြီးနားမြို.။ ဖုန်း - ၀၇၄၂၉၂၈၂ ၊ ၀၉၆၄၀၀၄၉၃ ဖားကန့် ရုံးခွဲ - အောင်ချမ်းသာအဆင့်မြင့်တည်းခို
ခန်းမြို့ မရပ်ကွက် ဖားကန့် မြို့ ။ ဖုန်း - ၀၉၆၄၁၃၁၉၄
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာ နှင့် ထိုင်း ၊ မလေးရှား ၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံများကို သွားရောက်လည်ပတ်လိုပါက--အမေရိကန်ရုံးခွဲ - ဖုန်း - 1-518-205-1121 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Email; spricatrip1@gmail.com Email This
SPECIAL TRIP အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားမှအထူးဝန်ဆောင...
ဘန်ကောက် ၊မလေးရှား ၊ စင်္ကာပူ သုံးနိုင်ငံ ခရီးစဉ်
SPECIAL TRIP ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးစဉ်
SPECIAL TRIP စင်္ကာပူခရီးစဉ်
SPECIAL TRIP မလေးရှား ခရီးစဉ် (ဓါတ်ပုံ -၂)
SPECIAL TRIP မလေးရှား ခရီးစဉ် (ဓါတ်ပုံ - ၁)
SPECIAL TRIP အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ခရီးသွားမှ အထူးဝန်ေ...